यस्तो हुन सक्छ र ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २३, २०७८ विप्लव प्रतीक
नजाने संसारको कुनकुन प्रदेश
उसकै मनखुसी डुल्दैडुल्दै,
कहिले नदी, पहाड, जंगल र सागर छुँदै
मायालुका केश फर्फराइदिँदै
केही थकित मानिसहरुलाई शीतल बाँड्दै
मन्द पवन मछेउ आइपुगेको छ
सुवासको सौगात लिएर ।
माथि गगनमा ताराहरु टिल्पिलटिल्पिल गर्दै
टुलुटुलु हेरिरहेछन् अचल, या हुनसक्छ अचम्मित,
जून पहाडको डिलबाट च्याउनच्याउन लागेकी छे–
के हेर्नलाई ? जादूसरी बदलिएको नगरी हेर्न,
वा केही नदेख्‍न ? या निश्चिन्त ऊ, आफ्नै धुनमा
माया र घृणाबाट मुक्त ।
कतै टाढाबाट कुनै पञ्छी चिर्बिराएको आवाज
दौडेर आउँछ र मेरो कानभित्र पस्छ
अनि हृदयलाई सुम्सुम्याएर जान्छ ।
यतिखेर मलाई के याद आउनु पर्ने थाहा छैन ।
मन लठ्ठिनु पर्ने हो यतिखेर शायद,
कहिले आँखा आफसेआफ खुल्ने
कहिले बन्द हुनुपर्ने हो यतिखेर
शरीर पूर्णतया स्थिर र शान्त हुनुपर्ने हो यतिखेर ।
तर, मन अचानक खल्बलिन्छ
तलाउमा पात खसेर हल्का तरंग फैलिएसरी
होइन मन खल्बलिएको,
मन त अशान्त सागरमा
उन्मादले भरिएको छाल जस्तै
हाम्फाल्दै अतितको इनारतिर झम्टिरहेछ सम्झनालाई ।
म के सम्झिउँ ? मृदु यादहरु ? आफ्ना भुलहरु ?
आफूले लगाएका गुनहरु, या कपट, मैले गरेका ?
अहा, हुकुम छैन मनको, मैले चाहेको कुरा सम्झिन ।
हे, जीवनका रचनाकार,
हेरिरहेछौं मेरो जिन्दगीको नाटक ?
मभित्र करुणा जागृत भएको देख्यौ होला,
मैले जतिसक्दो सबलाई प्रेम बाँडेको देख्यौ होला ?
मैले गरेका छल पनि देख्छौ होला,
मैले चित्त दुखाइदिएकाहरुको आँसु
पवन र समयसँग मिलेर सुकाइ पनि दियौ होला ।
तिमी अनुपम छौ, तिमीलाई सम्झिँदै
कृतज्ञ हुँदै निहुरिन्छ मेरो शिर ।
यतिखेर म सम्झिरहेछु मेरो अतित,
कतिखेर कसैले चालै नपाउने गरी
मैले खोसिदिएा कसैको खुशी– कुनै दिन खोल्न सक्छु आफ्नै पोल ।
कहिले तृप्तिका लागि गाास्नुपर्ने सम्बन्ध अञ्जानमा तोडो,
कहिले तृष्णाका कारण नगाास्नुपर्ने सम्बन्ध अबुझ भएर गाँसो,
नहिँड्नु पर्ने बाटो लुकेर हिँडे,
हिँड्नै पर्ने बाटोलाई नदेखेझौ गरो,
हो, यो सबै भन्न सक्छु म कुनै पनि बेला,
मेरो मन ह्वाङ्ग पार्न सक्छु बिना कुनै लज्जाबोध ।
तर, केही यस्ता गल्तीहरु छन्
जसका साक्षीहरु छैनन् अब,
र सुनाउन व्यग्र भएपनि मसाग सुनाउने आँट छैन,
जसले मलाई जीवनभर जलाइरहे,
मेरो लाशसँगै ती जल्नेछन् एकदिन,
मेरो निम्ति योभन्दा ठूलो र क्रुर सजाय
केही हुनै सक्दैन ।
यस्तो हुनसक्छ ?
कि तिमी देउ यी मानिसहरुलाई यौटा त्यस्तो विवेक,
जसले गर्दा मान्छेलाई मन खोल्न शरम नलागोस्,
मन खोल्दा कसैले कसैलाई नदााजोस्, नजोखोस्,
र, आफ्ना कर्म सबलाई सुनाउन सकुन् सबैले,
आफूले गरेका भूलहरु निष्फिक्री भन्न सकुन् सबैले,
आफ्ना अपराधहरु कबूल गर्न सकुन् सबैले निसङ्कोच,
ताकि सबैको मन कञ्चन होस्, निर्मल होस्,
र, साधै मुस्कुराईरहन सकुन् मानिसहरु, फूलजस्तै ।
संसार अहिले जेजस्तो छ– होस्,
तर, मानिसका कारण स्वर्गतुल्य होस्,
रचयिता, भनन, यस्तो हुनसक्छ ?
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ १३:४१
म रहुन्जेल प्रेमध्वजप्रतिको मेरो प्रेम झन् मदिर हुनेछ । मलाई विश्वास छ निष्ठुर हुँदै गएको संसारमा कहीँ न कहीँ प्रेमध्वजहरू बाँची नै रहेका छन्–रहनेछन् ।
वैशाख ३१, २०७८ विप्लव प्रतीक
खबर सुन्नेबित्तिकै दिमागभित्र चिसो सिरेटो पसेको महसुस भयो । जेजेमा अल्झिएको थिएँ, तिनको लठारो त्यहीँ छिनाइदिएँ । जुरुक्क उठेँ, कौसीमा गएँ । चारैतिर हेरेँ, प्रेमध्वज दाइले कुनै बखत देखेको मैतीदेवीको फाँटमा काउली र पालुङ्गोको सट्टा साना–ठूला घरहरू थिए । बाली धेरै उमार्न युरिया हाल्छन् रे भन्ने सुनेको हुँ, तर यी फाँटमा कुन युरियाले हलक्क बढे घरहरू– कुन्नि ? खल्लो मन झन् खल्लो भइरहेको थियो । नजाने कताबाट एउटा काग कौसीको डिलमा आएर उभियो र काग्का भनेर एकपल्ट करायो । समाचार अघि नै आइसकेको थियो । बेचैन थियो मन, म त्यस कागतिर हेर्दै नहेरी तल्लो तलातिर ओर्लिएँ ।
बिस्तारै मेरो सम्झनाको अन्तरङ्ग कन्तुर खुल्दै गयो । दाइसँग गाँसिएका प्रत्येक क्षणहरू फटाफट ‘इमेज’ बन्न थाले र म आँखा चिम्लिएर त्यही दुनियाँमा सफर गर्न थालेँ । उहाँका पुराना गीतहरू दिमागमा गुन्जिन थाले । शब्दको अर्थ नबुझी बडो गम्भीर भएर गुनगुनाउँदै हिँडेको याद आयो । प्रेमध्वज दाइलाई हिन्दुस्तानका रफीसँग दाँज्थे त्यसबेलाका मान्छेहरू । नेपालमा कदर नभएर इन्डिया गए रे भन्ने हल्ला फैलिएको याद आयो । अनि याद आयो उनको एलपी आएको, जुन हल्ला थिएन । त्यसमा गाएका गीतहरू सुनेर राजा महेन्द्रले उनलाई नेपालै बोलाए रे भन्ने पनि सुनियो । हिन्दुस्तानी अभिनेत्रीसँग सम्बन्धको हल्ला पनि सुनियो । फलानो गीत फलाना सुन्दरीका लागि समर्पित भन्ने हल्ला पनि चल्यो । जे होस् दाइका बारे अनेक उडन्ते खबर र किस्साहरू सुनिन्थे । र, काठमाडौंलीहरू स्वाद लिईलिई त्यसलाई सुन्थे ।
म आठ वर्षको हुँदै बाले कविता लेख्न हौस्याउनुभएको हो मलाई । सोह्र वर्षको उमेर पुगेपछि गीत पनि लेख्न थालेँ । अहिले आएर सम्झिँदा ती गीत र कविता बडा काँचा थिए । जे होस्, गीत लेखिसकेपछि त्यसको मुन्तिर गायक प्रेमध्वज, सङ्गीत नातिकाजी र रचना विप्लव प्रतीक भनेर लेख्ने गरेको पनि याद छ । यो कुरा बेग्लै थियो कि यो कुरा दाइलाई मैले कहिल्यै भनिनँ र त्यो गीत पनि कहिल्यै देखाइनँ । त्यतिखेर मैले किन नारायणगोपाल लेखिनँ या बच्चुकैलाश लेखिनँ थाहा छैन । फत्तेमान दाइ त छिमेकमै थिए, किन उहाँको नाउँ लेखिनँ, थाहा छैन । दबदबा त तिनको पनि थियो ।
म किशोरवयमै हुँदा मेरो परिवार विखण्डित भयो । त्यस विखण्डनले मलाई जीवनमा थुप्रै अर्थपूर्ण कोसेलीहरू दिएको छ । एउटा कोसेलीचाहिँ प्रेमध्वज दाइका रूपमा मिल्यो । म जोडिएको नयाँ परिवारको दाजु साइनो पर्ने हुनुहुँदो रहेछ प्रेमध्वज । हामी अक्सर उहाँको बागबजारस्थित घरमा जान्थ्यौँ । अरूले उहाँलाई गोविन (गोविन्द) दाइ भन्थे । मेरो बानी भने प्रेमध्वज दाइमा बस्यो । उहाँको घरमा विभिन्न परिकारहरू हाम्रा निम्ति बन्थे । हाँसको मासु पहिलोपल्ट त्यहीँ खान पाएँ मैले । दाइको आमा, किरण भाउजूलगायत हामी सबै रमाइला कुरा गथ्र्यौं, खान्थ्यौं । तर, दाइ भने बडो अनुशासित । गलालाई स्याहार गर्न के खाने के नखाने भन्ने उहाँको आफ्नै सूची थियो । उहाँका छोराहरू सानै थिए । रफी, योगेश वैद्य र दाइको गीत बज्यो कि जेठा छोराले बाको गीत आयो भन्ने गर्थे । दाइ मुसुमुसु हाँस्नुहुन्थ्यो । उहाँको दाँजोमा म निकै सानो भए पनि मँसग आज यो रेकर्ड भयो, भोलि यो हुँदै छ भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो । एक दिन उहाँको नयाँ गीत आयो । रेडियोमा दिन–रात घन्किन थाल्यो । एक दिन भेटेको बेला कस्तो लाग्यो भनेर मलाई सोध्नुभयो । कति नै ज्ञान थियो र मलाई ? मैले भनिदिएँ, त्यस्तो गीत तपाईंलाई सुहाउँदैन । मैले ज्ञानै नभई गरेको टिप्पणीलाई उहाँले गम्भीर भएर लिनुभयो, ‘ठीकै छ, एक्स्पेरिमेन्ट गरेको हो । कहिलेकाहीं गर्नुपर्छ । अनुरोध गरेको नाइँ पनि भन्न सकिनँ ।’
समय बित्दै गयो । मैले रसियन कल्चर सेन्टरमा जागिर पाएँ । अमेरिकन लाइब्रेरीमा पहिले नै उहाँको जागिर थियो । मेरो जिन्दगीले अर्कै दुनियाँ पाएको थियो । त्यसपछि उहाँको घर जाने चलन छुट्यो । केही वर्षपछि मेरो जागिर पनि छुट्यो । अब म फुक्काफाल भएको थिएँ । तर, दिउँसोको समय खिचापोखरीस्थित अमेरिकन लाइब्रेरी जाने र पढ्ने गर्थेँ । मलाई त्यसको लत लगाइदिने साथी शिशिर सुब्बा थिए । उनकै कारण फ्रन्ट डेस्कका हर्क गुरुङसँग चिनजान भयो । उनले मलाई एक दिन मेरा रुचिका केही किताब देखाउन माथि अफिसमा लगे । त्यहाँ देखेँ प्रेमध्वज दाइलाई । मतिर हेरेर मुसुक्क हाँस्नुभयो । उहाँको त्यो परिचित मुस्कान मेरा निम्ति थियो । म नजिक पुगेँ । नमस्कार गरेँ । वर्षौं भेट भएको थिएन, तर आत्मीयता उही थियो । ‘आउट अफ साइट, आउट अफ माइन्ड’ उहाँको मामिलामा मिलेन । छोटो कुराकानीमा उहाँले एउटा नयाँ अल्बम निकाल्ने योजना सुनाउनुभयो, अल्बमको नाउँ थियो– घाइते जवानी । ‘दाइ, यो टाइटल सुहाउला र ?’ दाइले भन्नुभयो, ‘साथीले राखिदिएको, कसरी नाइँ भन्नु ?’ कहिल्यै कसैको कुरा नकाट्ने, मुस्कुराइरहने, कुनै महत्त्वाकांक्षा नबोकेको र मृदुभाषी मान्छेलाई के सम्झाउनु ? हामी छुट्टियौँ ।
जिन्दगीसँग मलाई दिने विभिन्न सरप्राइजहरू थिए । एकपछि अर्को पाउँदै गएँ, स्वीकार गर्दै गएँ । देशमा पञ्चायतपछि प्रजातन्त्र भन्ने तन्त्र पनि आयो । म बिहानबिहान एकेडेमीको पछिल्तिर कोर्टमा ब्याडमिन्टन खेल्न जान्थेँ । हाम्रो समूहमा दीप श्रेष्ठ, हेमन्त श्रेष्ठ, शैलेन्द्र सिम्खडा आदि हुन्थे । एक दिन दाइलाई पर्खालबाहिर हिँड्दै गरेको देखेँ । उही मुस्कान । दौडिएर गएँ । ‘भाइ ब्याडमिन्टन खेल्ने रहेछ, मचाहिँ हिँड्नेमिन्टन,’ दाइले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो । बिहानको शारीरिक अभ्यास छोड्नुहुँदैन है, शरीरलाई राम्रो हुन्छ भन्दै दाइ जानुभयो ।
एक दिन कवि गोपाल पराजुलीले ‘गरिमा’ का लागि प्रेमध्वज दाइसँग एउटा अन्तर्वार्ता लिइदिनुपर्‍यो भन्नुभयो । नाइँ भन्न सकिनँ । प्रश्नहरू तयार पारेँ । शब्द चयन र सङ्गीतकार चयनमा किन ध्यान दिनु नभएको भनेर एउटा प्रश्न बनाएँ । त्यसलाई पछि काटिदिएँ । एउटा नदीजस्तो मान्छे, जसले बिनाअपेक्षा बग्न मात्रै जान्यो उसका लागि ‘क्रिटिकल’ प्रश्नहरूको के काम ? अन्तर्वार्ता छापियो । ‘गरिमा’ मा कवि पराजुलीले चलाएको चलन थियो– अन्तर्वार्ता लिने–दिने दुवैलाई पारिश्रमिक दिने । मैले प्रेमध्वज दाइले पाउने सात सय रुपैयाँ घरमै लगेर दिएँ । ‘अहिलेसम्म कतिले अन्तर्वार्ता लिन आए, तर पैसा त कहिल्यै पाइनँ । यो तपाईंले आफैं दिएको त हैन नि ?’ मैले भनेँ, ‘यो यही पत्रिकाले भर्खरै चलाएको चलन हो, अरूले दिने चलन बनाएका छैनन् ।’
साढे चार दशक त्यत्तिकै बितेर गयो । खेर गयो या केही दिएर गयो थाहा छैन । जे मिल्यो या गुम्यो त्यो नियति थियो । तर, मेरो नियतिमा छैन रहेछ मेरो गीतले प्रेमध्वज दाइको आवाज पाउनु । ‘हर रात सपनीमा ऐंठन हुन्छ’ भन्ने गीत सुनेर उहाँले मेरो ‘कविता’ को र गायक दीप श्रेष्ठको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको थियो । उहाँहरूको पालामा रचनालाई कविता भन्ने चलन थियो । रह्यो मेरो कुरा– कतिलाई प्रेमध्वज दाइकै गीत गाएर मैले मख्ख तुल्याएको थिएँ । उहाँकै गीत गाएर साथीहरूमाझ प्रिय बनेको थिएँ । हामीबीच सम्बन्ध पनि मधुर थियो । सायद उहाँको नमाग्ने बानी र मेरो आग्रह नगर्ने बानीको संयोग होला त्यो ।
केही वर्षअघि धरानका भाइ किरण श्रेष्ठले प्रेमध्वज दाइलाई अभिनन्दन गर्न चाहेको योजना सुनाए । मैले ‘जाऊ, गएर भेट न त’ भन्दा उनी मानेनन् । मलाई सँगै गइदिन अनुरोध गरे । हामी गयौं । दाइलाई मैले सबै कुरा सबिस्तार सुनाएँ । ‘भाइ आइसकेपछि भैहाल्यो नि †’ उहाँले मान्नुभयो । एक छिन गीत–सङ्गीतको कुरा चल्यो । मैले पहिलोपल्ट दाइले केही गुनासो गरेको सुनेँ । ‘पहिलेजस्तो हिन्दुस्तानी सङ्गीत छैन अचेल । मनलाई चक्क छुने पहिलेका जस्ता गीतहरू अहिले खोइ ? अब हिन्दी गीत होइन इन्डियाका सबै गीत पन्जाबी । हामीकहाँ पनि राम्रो कविता पाई नै छाड्यो ।’ गुनासो गरिरहेका गायकलाई मैले पुलुक्क हेरेँ । गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर बोलीमा आक्रोश थिएन, सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो–मुस्कुराएर ।
अचानक समयको सन्दुसबाट कोरोना निस्कियो । लकडाउन सुरु भयो । लकडाउनकै कारण एक वर्ष रोकिएको ‘भक्तराज सङ्गीत सम्मान’ ०७७ सालको उत्तराद्र्धमा एउटा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरियो । त्यसैबेला हो प्रेमध्वज दाइसँग भेट भएको, सँगै तस्बिर खिचेको, म बिदा भएको र उहाँ रसिला आँखा लिएर मुस्कुराएको । झलझली आइरहेछ त्यो निश्छल अनि कताकता लजालु मुस्कानको सम्झना ।
मानिस पशुभन्दा श्रेष्ठ होला, किनभने ऊसँग शब्दहरू छन्, भावना अभिव्यक्त गर्ने औजार छ । तर, होइन, विभिन्न भाषाहरूबीच यत्रो शब्दको भण्डार भएका मानिसहरू उत्तिकै गरिब पनि छन् । देश लुटिनेहरूको वेदना के पीडा भन्ने शब्दले मात्रै व्यक्त गर्न सक्छ ? प्रेम वियोगमा नारी र पुरुषले भोग्ने विरह एउटै शब्दले बराबरी व्यक्त गर्न सक्ला ? नारी मनले सहेको वेदना र पुरुष मनले भोग्ने वेदना एउटै शब्दले कहाँ भन्न सक्छ र ? परदेशबाट वर्षौंपछि फर्किएको छोरोलाई देखेर प्रफुल्लित आमाको खुसी र अनेकौं विघ्नपछि मायालुलाई भेट्न पाउँदा प्रफुल्ल भएको प्रेमीको खुसीलाई केवल खुसी भन्ने शब्दले मात्रै व्यक्त गर्न सक्ला ? कतिपय ठाउँमा शब्दले पूर्ण रूपमा भावलाई व्यक्त गर्न सक्दैन । प्रेमध्वज दाईबारे केही लेखिरहँदा म भने एउटा नयाँ शब्द जन्माउन खोजिरहेछु– कहिल्यै कसैको कुरा नकाट्ने, मुस्कुराइरहने, कुनै महत्त्वाकांक्षा नबोकेको, मृदुभाषी मान्छेलाई म अबदेखि ‘अहो, कस्तो प्रेमध्वजजस्तो’ भन्नेछु ।
म रहुन्जेल प्रेमध्वज दाइप्रतिको मेरो प्रेम झन् मदिर हुनेछ । अब त्यही रेशमी स्वर भएका प्रेमध्वज भेट्न सम्भव नहोला । तर, मलाई विश्वास छ निष्ठुर हुँदै गएको संसारमा कहीँ न कहीँ प्रेमध्वजहरू बाँची नै रहेका छन्–रहनेछन् । तिनकै कारण संसारमा प्रेमको कमी हुने छैन । र, तिनकै कारण प्रेमको ध्वज हामीमाझ फहराईरहनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७८ १८:५८